वेस्ट इन्डिजमाथि इंग्ल्यान्डको क्लिनस्विप ! | Hamro Khelkud
वेस्ट इन्डिजमाथि इंग्ल्यान्डको क्लिनस्विप !
एजेन्सी – वेस्ट इन्डिजसँगको तीन टि२० श्रृंखला पाहुना टोली इंग्ल्यान्डले क्लिनस्विप गरेको छ । अन्तिम खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई ८ विकेटले हराउँदै इंग्ल्यान्डले श्रृंखला ३-० ले जितेको छ ।
सामान्य ७२ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले १०.३ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो । इंग्ल्यान्डका लागि ओपनर जोनी बेस्ट्रोले ३१ बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गर्दै ३७,एलेक्स हेल्स २० रनमा आउट हुँदा कप्तान ईयोन मोर्गन १० र जो रुट ४ रनमा अविजित रहे । वेस्ट इन्डिजका कप्तान जोसन होल्डर र देवेन्द्र विशुले एक एक विकेट लिए ।
त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डको कसिलो बलिङ सामु १३ ओभरमा अल आउट हुँदै ७१ रनमा समेटियो । वेस्ट इन्डिजका लागि जोहन क्यापवेल,जोसन होल्डर,निकोलस पुरनले समान ११ र आबेद म्याकोयले १० रन जोड्न बाहेक अन्य कुनैपनि ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
इंग्ल्यान्डका डेविड वेल्लीले ३ ओभरमा ७ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यस्तै मार्क वुडले ३,आदिल राशिदले २ र जो डेनलीले १ विकेट लिए । यस भन्दा अघि पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्ड ४ विकेट र दोस्रो खेलमा १ सय ३७ रनले विजयी भएको थियो ।